रोनाल्डो : आलोचकहरु मलाई विफल पार्न ‘राइफल’ लिएर बसेका हुन्छन !! - Experience Best News from Nepal
रोनाल्डो : आलोचकहरु मलाई विफल पार्न ‘राइफल’ लिएर बसेका हुन्छन !!
पाच पटकका बालोन डी’ओर बिजेता क्रिस्टियानो रोनाल्डोले हालै रोमा विरुद्धको खेल पश्चात एक टिपड्डी गरेका छन् । उनले धेरै चोटी आफु मैदानमा उत्रिदा उनलाई खेलमा लड़ोस र हारोस चिताउने धेरै रहेको र खेलमा निकै दबाव दिने गरेको बताएका छन् । रोनाल्डोले भने रोनाल्डो यन्त्र मानव होइन हर बार जित दिलाउन, उनि भन्छन आलोचकहरु मेरो हारमा राइफल लिएर मलाई कुरेका हुन्छन ।
३४ बर्षे रोनाल्डोले सिरी -ए फुटबलमा एक कोसेढुंगा पार गरेका छन । उनको हर खेल शैलीलाई दशक देखि हर फुटबल प्रेमीले देखिरहेका छन् र उनको हर प्रयासलाई राम्रो मानिएको पनि छ । तर सिजन भर रोनाल्डोले आफु इटालीमा स्थापित रहन हर प्रयास गरेको बताए भने रोनाल्डो दिनहु आफु खेलको दबावमा परेको समेत बताएका छन् । रोनाल्डोले तिन क्लबका लागि खेल खेलिसकेका छन् र खेल्दै छन्, स्पोर्टिंग, युनाइटेड र युभेन्ट्स तर आलोचकको ब्यबहारले भने रोनाल्डो निकै मारमा परेको बताउछन् ।
रोनाल्डोलाई हर बखत हर खेलमा जित निकाल्नै पर्ने बाध्यता रहेको बताउछन, उनि भन्छन रोनाल्डोलाई सहज छैन, रोनाल्डो यन्त्र मानव होइनन् दुख पिडा सबैलाइ हुन्छ र हार जित हर खेलमा हुने गर्दछ । रोनाल्डोले गोल गर्ने पर्ने साथै रोनाल्डोको एक पेनाल्टी मिस र खराब पदर्शनका निम्ति आलोचकहरु राइफल लिएर कुरेका हुन्छन – रोनाल्डो बताउछन् । हर दवाबका निम्ति रोनाल्डो भन्छन आफु सालौ देखि तयार छन् तर खराब दिन हर खेलाडीको आउने गर्छ ।
रोनाल्डोलाई हर साल आफु मजबुत बन्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ हर समर्थकको चाहामा उनको खेलमा अझ मजबुत देखाउनु छ, तर रोनाल्डो ३४ का भए उक्त बढावा दिन रोनाल्डो नसक्न सक्छन ।
रोनाल्डो भन्छन – म फुटबललाई एक मिसनको रुपमा हेर्छु, मैदानसम्म लगेर जित निकाल्न र सुधार गर्ने हमेशा प्रयासमा हुन्छु ।
मैले हरेक लिगमा संगर्ष गरेको छु र समर्थकहरु मेरो राम्रो पदर्शनको खोजिमा हुन्छन, सधै र हमेशा ।
म मड्रिडमा हुदा इतिहासकै महँगो खेलाडी थिए, युनाइटेडबाट २३ बर्षकै उमेरमा गोल्डेन बुट जित्दा मेरो सर्बाधिक उचाई रहेको मापन गरियो र आज सम्म पनि हरेकको आशामा नयाँ उर्जा र नीतिको खोजिको देख रोनाल्डोमा खोजिन्छ रोनाल्डो थप्छन् ।
— goal.com को एक लेख अनुबाधित
रोनाल्डोलाई पहिलो सिरी ए टाइटल !! एलेग्रीका निम्ति ५ औ सिरी ए टाइटल
म्यानचेस्टर युनाइटेड फर्किने अफवाह अस्वीकार गर्दै क्रिस्टियानो रोनाल्डो
सार्रीले चेल्सीबाट जोर्जिन्हो र इमर्सन ल्याउन युभेन्ट्सलाई गरे सुचित
युभेन्ट्सका निम्ति खेलाडी किन्दै रोनाल्डो : चार खेलाडी माथि राखे प्रस्ताव !! रोनाल्डोको चयनमा को-को ?
रोनाल्डोलाई अर्को सिजन सार्रीले कसरी मैदानमा उतार्दै छन् !! भेटवार्तामा सार्रीले बताए आफ्नो खेल रणनीति